Uqeqesho lwe-Hyperbaric - I-Hyperbaric Technologist eqinisekisiweyo-Hyperbaric Oxygen Treatment HBOT
Uqeqesho lwe-Hyperbaric - Ulwabiwo lwe-Oxygen Oxygen HBOT
ikhaya/IiNkonzo zeeHarbara/Uqeqesho lwe-Hyperbaric - Ulwabiwo lwe-Oxygen Oxygen HBOT
Uqeqesho lwe-Hyperbaric - Ulwabiwo lwe-Oxygen Oxygen HBOTtekna_mod2018-01-21T12:48:49+00:00
I-Tekna inikezela ngezi zifundo ezilandelayo ze-Hyperbaric nge-Caribbean Hyperbaric Medicine.
Zonke iikhosi ezivunyiwe yi-American College of Hyperbaric Medicine (ACHM)
Idiving Medical Technician
Umlawuli woKhuseleko lweHroperbaric
I-Acrylic Acrylics Chamber
Le khosi ihlaziywe kwaye ivunyiwe yiNational Board of Diving & Hyperbaric Medical Technology (NBDHMT) idibene neemfuno njengenqanaba lokuqala kwiyeza zonyango. Ukongezelela le khosi ihlaziywe kwaye ivunyiwe yi-American College ye-Hyperbaric Medicine ye-40 Category "A" ye-CEU. Ikhosi yeeyure ze-40 ifanelekile kuGqirha kunye nabanye abasebenzi bezonyango kunye neeseshoni zokusebenzisana
Le khosi ihlaziywe kwaye ivunyiwe yi-American College ye-Hyperbaric Medicine kunye ne-NBDHMT ye-40 I-Class "A" ye-CEU. Abanorhwebo, abaqeqeshi kunye nezobunzululwazi badla ngokufumana umsebenzi emsebenzini wezokwelapha kunye nokuhlala kwendawo. Imigama ende kunye namakhulu amaninzi amanzi anganyanzelisa ukukhutshwa kwezonyango zabanye abalimele.
Le khosi epheleleyo yeeyure ze-26 yenzelwe ukubonelela ngezixhobo ezifunekayo kunye nezibonelelo ukufezekisa uxanduva lomlawuli wokhuseleko lomxhasi (njengoko kuchaziwe yi-NFPA 99).
Le khosi epheleleyo yeeyure ezisibhozo yenzelwe ukuqeqesha abaqhubi begumbi kunye nezobuchule bokugcinwa kwimiba yokuhlolwa okufanelekileyo, ukunakekelwa, kunye namaxwebhu okubheka i-acrylic (iindawo zokujonga iiflethi) zeCandelo A, B, & C, iinqanawa zokuxinzelelo.
Uqeqesho lwe-Hyperbaric - Qalisa umsebenzi wakho kwi-Hyperbaric Medicine. Funda kwi-Best Teachers available kwaye ufumane imfundo ebalulekileyo kuyo Unyango lwe-Oxygen Hyperbaric HBOT. Qhagamshelana nathi namhlanje kwiShedyuli zeeKlasi zoQeqesho lweHrobhubar.